Miyaad tahay YouTuber yar oo ku dhibtoonaya inuu kobciyo kanaalkaaga? Ma waxaad isku dayeysaa inaad hesho aragti dheeri ah laakiin ma hubtid waxaad sameyso? Miyaad wax su'aalo ah ka qabtaa barxadda laakiin ma garanaysid qof aad weydiin karto? Hadday sidaas tahay, markaa adeeggayaga Qiimeynta Kanaalka YouTube adiga ayaa adiga ah. Khubaradeenu waa adiga YouTubers laftooda, kuwaas oo haysta malaayiin muuqaal YouTube ah, oo ku dhow 1 milyan oo macaamiil ah waxayna abuurayaan fiidiyoow sanado badan. Khubaradeenu waxay yaqaanaan YouTube-ka gudaha waxayna kula wadaagi doonaan aqoontooda iyagoo sifiican ugufiirinaya kanaalkaaga YouTube-ka fiidiyaha.
Sideen Dadka Ugu Weydiiyaa Inay Isku Qoraan Channelkeyga?
1) Waan fiirin doonaa fiidiyowyadaada waxaanan ku siin doonnaa dhaliil wax dhisaysa. 2) Talooyin ku saabsan sida aad uga dhigi karto fiidiyowyadaada kuwo ka fiican sidii loo kordhin lahaa waqtiga daawashada iyo haynta dhagaystayaasha. 3) Waxaan dib u eegi doonaa cinwaanadaada iyo thumbnails-ka, istaraatiijiyadda nuxurka, ereyada muhiimka ah iyo sharraxaadda, bogga hore iwm. 4) Waxaan la wadaagi doonnaa sirteenna ku saabsan sida loo horumariyo fiidiyowyadaada loona helo macaamiisha. 5) Waxaan falanqeyn doonaa tartamayaashaada waxaanan kuu sheegi doonaa sida aad uga fiicnaan laheyd iyaga. 6) 5-Tallaabo Qorshe Hawleed!
Maya, uma baahnin aqoonsigaaga soo galitaanka. Ma galno kanaalkaaga YouTube. Waxaan ku siineynaa fiidiyoow 45 + daqiiqo ah oo naga mid ah oo si fiican u qiimeynaya kanaalkaaga waxaadna hirgelin kartaa fikradaha / isbeddelada aan soo jeedineyno ee ku habboon.
Haa! Waxaan dib u eegi doonnaa kanaalkaaga fiidiyowga oo waxaan kuhadleynaa Ingiriisiga, laakiin waxaan kuugu soo bandhigi doonaa cinwaanno turjumaad ah luuqadda aad doorbideyso. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku daawato fiidiyowga, adoo akhrinaya qoraallada hoose si loo hubiyo inaad fahamsan tahay wax walba oo aan dhahayno. Softiweerka tarjumaada ee aan isticmaalno waa mid aad ufiican waxayna qaban doontaa shaqo aad ufiican oo ah turjumaada luqada aad doorbideyso. Waxaad si buuxda u fahmi doontaa waxa aan ku iri qiimeyntaada.
Fiidiyowga aad naga heli doontid wuxuu dhererkiisu noqon doonaa 45+ daqiiqo oo ay ka buuxdo aragti qiimo leh kanaalkaaga YouTube. Kadib markaad amarkaaga dhigato, waxay caadi ahaan nagu qaadataa 3-7 maalmood si aan u dhammaystirno Qiimeynta Kanaalkaaga.